Ovaltine Myanmar successfully organized its “Warm Family Bonding” Thadingyut Campaign with grandeur – LYCA COMMUNICATIONS
Ovaltine Myanmar successfully organized its “Warm Family Bonding” Thadingyut Campaign with grandeur
Date: October 21, 2019Author: Rahul0Comments
Yangon – October 21, 2019 – Ovaltine in Myanmar has taken the initiative activity to build the culture of “Warm Family Bonding” in the suspicious family occasion of THADINGYUT withagrandeur as it is done every year.
Followed by the success of previous years, Ovaltine have connected with millions of people in Myanmar with the message of giving back to their home, for family reunion and give them “Happy Surprise” to make their moment memorable in this Thadingyut.
As part of the campaign was, Ovaltine has conducted the mystery shopper campaign at more than 380 shops and supermarkets, selected across Yangon and Mandalay from September 24 to October 13. The designated activation team from Ovaltine has providedasurprise gift to the mystery shopper who came to buy whatever Ovaltine products in those shops. This campaign has covered about 1,800 shoppers with many exciting gifts.
“I am so happy that I receiveasurprise gift unexpectedly. I bought Ovaltine for gifting purpose. Ovaltine provides complete nutrition and make the consumers active and strong. In my home, elderly people drink it usually. Thanks Ovaltine for this surprise gift “said Ma Su Myat Thwe lived in Sanchaung.
To facilitate last-minute purchases for the travelers and to keep the moment of the festival, Happy Surprise gift campaign along with Ovaltine products selling booth, Ovaltine sampling activities and food truck were also arranged at Aung Mingalar, Dagon Ayeyar Bus Stations in Yangon and Kyawe Sal Kan Bus Station in Mandalay from October 10 and 11.
Ovaltine has also engaged with Myanmar’s leading actress Thet Mon Myint and her family to highlight the theme message and culture of giving Happy Surprise to random Myanmar family homes.
Moreover, Ovaltine Myanmar organizes “Ovaltine Thidingyut Lantern Creation Contest” for over 120,000 students from 700 schools across the country to promote the traditional culture and creativity of the young students.
Ovaltine မှ ယခုနှစ်သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်အထူးအစီအစဉ်များကိုထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူများနှင့်အတူ ခမ်းနားစွာဆင်နွှဲခဲ့
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၁)ရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် – Ovaltine မှ “ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိသားစုပြန်လည်စုံစည်းမှု” ကိုဖော်ဆောင်သည့် ယခုနှစ်သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အထူးအစီအစဉ်များကို ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူ များနှင့်အတူ ခမ်းနာကြီးကျယ်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။
ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ပင် ယခုနှစ် သီတင်းကျွတ်အထူးအစီအစဉ်များကို စားသုံးသူတို့အား မိသားစုပြန်လည် ဆုံစည်းခြင်းနှင့် မိသားစု ပျော်ရွှင်စရာအချိန်များ ဖန်တီးဖြစ်အောင် Ovaltine မှပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပွဲတော် ကာလအတွင်း မိသားစုနှင့် အမှတ်တရအချိန်လေးများအတူ ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် “အံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်စေမည့် လက်ဆောင်များ” လည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
Ovaltine မှ ယင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် သီတင်းကျွတ်အထူးအစီအစဉ်များအနက် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များရှိ စူပါမားကတ်များ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့် ကုန်စုံဆိုင် စုစုပေါင်း ဆိုင်(၃၈၀) ကျော်ကို ရွေးချယ်ကာ သတ်မှတ်ရက် စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့ မှ အောက်တိုဘာလ (၁၃)ရက်နေ့ အထိ Ovaltine မှမည့်သည်ထုတ်ကုန်မဆို ဝယ်ယူသူကို Ovaltine ၏ activation အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အမှတ်မထင် Surprise လုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်သီတင်း ကျွတ်လက်ဆောင်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ ယင်း အစီအစဉ်အတွက် ဝယ်ယူသူစုစုပေါင်း (၁,၈၀၀) ဦးအား လက်ဆောင်မျာ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အခုလို အမှတ်မထင် Surprise Gift ရတော့ ကျွန်မအရမ်းကို ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားပါတယ်။ အခုလာဝယ်တဲ့ Ovaltine က လက်ဆောင်ပေးဖို့ပါ။ Ovaltine က သောက်သုံးသူတွေကို အားအင်ရှိစေပြီးလန်းဆန်းတက်ကြွ စေပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ လူကြီးတွေကို အဓိက တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ Ovaltine ကိုလည်း အခုလို Surprise လက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု အောက်တိုဘာလ (၅)ရက်နေ့က လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာစင်တာတွင် Surprise Gift ်ရရှိခဲ့သူ စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေ မစုမြတ်သွယ်က ပြောပါသည်။
ထို့အပြင် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့ နှင့် (၁၁)ရက်နေ့ တို့တွင် နေရပ်သို့ အသီးသီးပြန်ကြသော ခရီးသွားပြည်သူများအတွက် Ovaltine မှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အောင်မင်္ဂလာ၊ ဒဂုံဧရာ အဝေးပြေးကားဂိတ်များနှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ ကျွဲဆည်ကန် ကားဂိတ်တို့တွင် ထုတ်ကုန်များအား ရောင်းချပေးခြင်း၊ surpriseလက်ဆောင်များ ပေးခြင်းနှင့် Ovaltine အအေးဗူးများ တိုက်ကျွေးခြင်း ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ် သီတင်းကျွတ် လက်ဆောင်များ အမှတ်မထင်ပေးအပ်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုများကို မျှဝေပေးသည့်ပွဲတော်၏ အငွေ့အသက် ပိုမိုထင်ဟပ်စေရန်အတွက် အစားအသောက်များကိုပါ ရောင်းချပေးသည့် Food Truck ကို လည်းထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အိုဗာတင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် သက်မွန်မြင့်နှင့် သူမ၏မိသားစုမှ အိုဗာတင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ပိုမိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် မြန်မာမိသားစုများဆီသို့ “Happy Surprise” အနေနှင့်ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်ကိုလည်း အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး အနာဂတ်ကလေးငယ်များအနေဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်စေရန်နှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ကို အားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်န ှင့်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားကိုလည်း အများပြည်သူသို့ ချပြခွင့်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ကာ “ပျော်ရွှင်စရာ သီတင်းကျွတ်မီးပုံးဖန်တီးမှုပြိုင်ပွဲ” ကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ မှကျောင်းပေါင်း (၇၀၀) မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုစုပေါင်း (၁)သိန်းကျော်ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
DKSH MyanmarFamilyLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyNutritionOvaltineOvaltine MyanmarPRPress ReleasePublic RelationsThadingyut FestivalYangon
Previous Previous post: Ovaltine Myanmar to organize “Warm Family Bonding” Thadingyut campaign with grandeur
Next Next post: NIVEA MEN celebrates the launch of the new range of NIVEA MEN DEEP products in Yangon